Mirehareha i Nepal ho tonga firenena voalohany hahatafakatra avo roa heny ny isan’ny tigra ao aminy amin’ny taona 2022 · Global Voices teny Malagasy
Mirehareha i Nepal ho tonga firenena voalohany hahatafakatra avo roa heny ny isan'ny tigra ao aminy amin'ny taona 2022
Voadika ny 13 Oktobra 2018 5:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Español, 日本語, Français, Nederlands, 繁體中文, English
Tigra Bengal iray mitodika mijery any amin'ny Valan-javaboahary Nasionaly Bardia ao Nepal. Sarin'i Sagar Giri. Nahazoana alalana.
Velom-panantenana ireo mpandala ny tontolo iainana amin'i Nepal ho lasa firenena voalohany hampiakatra ny isan'ireo tigra ao aminy avo roa heny amin'ny taona 2022. Tamin'ny 23 septambra 2018, Androm-pirenena ho Fiarovana ny Tontolo Iainana dia nanambara i Nepal fa manana tigra miisa 235 izy miaina any an'ala. Tamin'ny taona 2009, tigra miisa 121 monja no tao Nepal.
Nepal's latest tiger census is now out, and – DRUMROLL – number of Bengal Tigers in #Nepal has increased to 235 – a remarkable 94% increase since 2009! We are proud to have helped protect these endangered cats. It’s good for conservation & for tourism. ?https://t.co/N1S9Ypj33D pic.twitter.com/eyNxlYyxzu
Efa nivoaka ny fanisana tigra farany tao Nepal, ary – DOBOKA AMPONGA- nitombo ho 235 ny isan'ny Tigra Bengal ao Nepal – fitomboana ho 94% miavaka nanomboka tamin'ny taona 2009! Faly izahay fa nanampy tamin'ny fiarovana ireo sakabe tandindonin-doza ireo. Tsara ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizahan-tany izany.
Tamin'ny taona 2010, nandritra ny Vovonana (momba ny) Tigra izay natao tany Saint-Pétersbourg, Rosia, nanao fanamby amin'ny fampiakarana avo roa heny ny isan'ireo tigra amin'ny taona 2022 ny Governemanta Nepaley niaraka tamin'ny governemantan'i India, Rosia, Nepal ary Bhutan.
Karazam-biby narovana hatrany ny Tigra, izay hajaina amin'ny angano Haindoa satria soavalin'i Durga, ilay Andriamanimbavin'ny Fahefana. Amin'ny maha-mariky ny fahefana sy ny herimpo azy ireo, tandindonin-doza ireo tigra noho ny fihenan'ny isany, ny fihazana tsy ara-dalana ary ny fandringanana sy ny fanimbana ny toeram-ponenany.
Taloha, karazana tigra miisa sivy (Bengal, Siberiana, Indo-Shinoa, Shinoa Atsimo, Sumatrana, Malayan, Caspian, Javaney, ary Bali) no nirenireny tany amin'ny firenena miisa 13, nanomboka hatrany Torkia ka hatrany amin'ny firenena maro any Atsimo Atsinanan'i Azia. Anisan'izany ireo tigra Caspiana, Javaney sy Bali izay efa lany tamingana. Fantatra amin'ny tigra Bengal i Nepal .
Tany am-piandohan'ny taompolo 1900, manodidina ny tigra miisa 100.000 no nirenireny tany an'ala. Ankehitriny, notombanana manodidina ny 3.900 ny isan'ny tigra manerantany. Mirehareha amin'ny tigra anaty ala miisa 2.226 i India – ny isa ambony indrindra eran'izao tontolo izao.
Hita any Nepal ao amin'ny Valan-javaboahary Nasionaly Chitwan , Bardia , Banke, Shuklaphanta, ary Parsa ireo tigra. Teo aloha, nambarà ho valan-javaboary voalohany manerantany ary nankatoavin'ny Fenitra Fiarovana Tigra (CA|TS) tamin'ny taona 2015 ny Valan-javaboary Nasionaly Chitwan any Nepal.
Sarotra ny manara-dia ireo tigra noho ny natiorany mandositra. Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana fanta-daza momba ny tigra Dr. Ullas Karanth, tamin'ny taompolo 1960, dia nihevitra ny manampahefana tao India, Nepal, Bangladesh ary Rosia fa toy maha tsy manam-paharoa ny dian-rantsan-tanan'olombelona dia tokony ho samihafa ny rantsan'ny tigra. Nihevitra izy ireo fa afaka nanisa ireo tigra tamin'ny alàlan'ny fanisana ny dian'izy ireo, saingy tsy nahomby ilay fomba fiasa.
Amin'ny fandrosoana ara-teknolojia, ny tigra amin'izao fotoana izao dia isaina amin'ny alàlan'ny fangalana sary ny endriky ny lamosiny izay tsy manam-paharoa ary alain'ny fakantsary miafina napetraka manerana ny lalan'ny tigra. Mampiseho ny fomba fanisana ny tigra ao Nepal ity horonantsary manaraka ity, izay nahitana mpiasa miisa 300 nandany 16.811 andro niaraka tamin'ireo fakantsary miafina miisa 1.643 ary avy eo dia nandinika ireo volon'ny tigra araka ny asehon'ny lahatsary:
Na izany aza, naneho fisalasalana momba ny fomba fanisana tao amin'ny lahatsorany « Ny Olana Amin'ny Isan'ny Tigra » i Dr. Karanth:
Mikendry ny hampitombo ny isan'ireo tigra ho 6.000 amin'ny taona 2022 ireo vondrona (ny WWF sy ny Fivoriambe ho an'ny Tigra Manerantany). Saingy, ny isan'izy ireo izay mifototra amin'ny tombatombana ofisialy dia miankina amin'ny fomba fiasa tsy mety, anisan'izany ny fanaovana safobemantsina ny statistika azo avy amin'ny fankatsarin'ny tigra sy ny fanisana ny dian'ny tigra
Hetsika hiarovana ny tigra ao Nepal
Notarihan'i Nepal ny hetsika manerantany hiarovana ny tigra tamin'ny valin'ny fanisana tigra vao haingana izay nampiseho ny fitomboanisan'ny tigra.
Nanangana fepetra maro mba hamonjena ireo karazam-biby mahafinaritra ireo ny governemantan'i Nepal, niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana. Araka ny voalazan'ny fanadihadiana “ Hetsika Hiarovana ny Tigra ao Nepal” dia napetrak'i Nepal ny Komity Nasionaly momba ny Fiarovana ny Tigra sy ny Tambajotra Fanaraha-maso ny Biby sy ny Zava-maniry any Azia Atsimo.
Nosoniavin'i Nepal ihany koa ny taratasy fifanarahana tamin'i Shina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mifantoka amin'ny fampihenana ny fivarotana tsy ara-dalàna ny biby sy ny zava-maniry any anaty ala, anisan'izany ny tigra. Ny fanambaràn'i Nepal momba ny Valan-javaboahary Nasionaly Banke ho toy ny faritra voaaro dia nanome faritany lehibe kokoa ho an'ireo tigra. Hanampy amin'ny fanombanana ny fahombiazan'ireo hetsika fiarovana ary hamolavolana drafitra ho an'ny fitantanana amin'ny hoavy ny fanombanana ny habetsahan'ny tigra sy ny toeram-ponenany (ny fisian'ny sakafo any amin'ny toeram-ponenana rehetra hanohanana ny biby mpihaza iray).
Tena ilaina amin'ny fampitomboana ny isan'ireo tigra ny fepetra fanampiny toy ny kianja fiofanana sy ny ekipa ho amin'ny fiarovana amin'ny fampiasana ny teknolojia SMART (Fitaovana fanaraha-maso sy hanaovana tatitra avy eny an'habakabaka) sy ny fametrahana ny hetsika fanoherana ny fihazana biby tsy ara-dalana eo anivon'ny vondrom-piarahamonina mba hanatsarana ny fanaraha-maso ny faritra.
Zava-dehibe ihany koa ny fitantanana ny zava-maitso ho amin'ny fiarovana. Miaraka amin'ny fananganana ny faritra mando, afaka mahazo ny loharanony manokana ny tigra, na dia amin'ny vanin-taona maina aza, mba tsy handehanany hitady rano any amin'ny fanatobian-drano ampiasain'ny olombelona any amin'ny faritra fanangonan-drano. Miaro ny doro ala tsy hiparitaka sy miaro ny bibidia, anisan'izany ny tigra, ny fametrahana ny tsipika famerana ny afo toy ny fiadiana lavaka.
Amin'izao fotoana izao, velom-panantenana momba ny fampitomboana avo roa heny ny isan'ny tigra any Nepal amin'ny taona 2022 ireo manam-pahaizana momba ny tigra Nepaley. Tigra miisa 15 sisa no ilainy mba hanatrarany ny tanjony ao anatin'ny efa-taona manaraka!
Nilaza ireo manam-pahaizana momba ny tigra fa mizotra soaman-tsara ny lalan'i Nepal amin'ny fanatrarany ny tanjony hampitombo ny isan'ireo tigra ho 250 ao anatin'ny efa-taona.